अब काँग्रेस सिद्धियो- प्रचण्ड::Leading Nepal News
अब काँग्रेस सिद्धियो- प्रचण्ड
काठमाडौं, ७ साउन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काँग्रेसले खोजेको के हो भनेर प्रश्न गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको ४० औँ स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले गोविन्द केसीको पुच्छर समातेर काँग्रेस हिंड्नुपर्ने अवस्था आएको हो भनेर प्रश्न गरे । उनले आनशनरत गोविन्द केसीलाई काँग्रेसले किन बोकिरहेको छ भन्दै भने, ‘ डा.गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न हामी तयार छौं । सरकारले वार्ता कमिटी बनाएको छ । अनि किन सरकार र नेकपा नेतालाई केहि गरेन भनेर दोष दिंइदैछ । कति लचिलो हुनुपर्ने हो त्यो पनि हामी तयार छौं । उहाँको जीवनरक्षाप्रति हामी संवेदनशिल छौं ।’
प्रतीपक्षी दलप्रति कडारुपमा प्रस्तुत भएका प्रचण्डले भने, ‘नेपाली काँग्रेसले खोजेको चाँहि के हो ? त्यो प्रश्न मुख्य छ । काँग्रेसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, डा. गोविन्द केसीको पुच्छर समातेर तार्न खोज्यो, हरण गर्न खोजेको हो ? काँग्रेसले आफ्नो राजनीति गोविन्द केसीमार्फत गर्नपर्ने ठाउँमा पुगिसकेको हो ? काँग्रेस यति निम्छरो, काँग्रेस यति कमजोर, यति एजेण्डाविहिन, यति अलोकतान्त्रिक भईसकेको हो ?’उनले शान्ति सम्झौताका विषयलाई कोट्याउँदै भने, ‘अस्ति भर्खर बाह्रबुँदे सम्झौता गरेको पार्टीको आफ्नो केहि एजेण्डा छैन । गोविन्द केसीको माग पुरा गर भनेर सम्पूर्ण तोडफोडमा उत्रन खोजेको हो काँग्रेस ? यदि हो भने यो भन्दा ठूलो बिडम्बना केहि हुन सक्दैन ।’उनले काँग्रेस सिद्धिएको समेत भन्न भ्याए । कार्यक्रममा उनले भने, ‘मेरो दृष्टिमा काँग्रेस अब सिद्धियो भन्ने देखेको छु । काँग्रेस अगाडि आउने होईन अब यो अवसानको बाटो हो ।’
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति गरौं भन्दा देउवाले नमानेको भन्दै प्रचण्डले भने, ‘एउटा व्यक्तिको मागलाई मानिदिनुपर्ने हो भने यो संसद प्रतिनिधिसभा किन चाहियो ? चुनाव किन गर्नुपर्‍यो रु प्रदेश सभा किन चाहियो ? स्थानीय तह किन चाहियो ? बीच–बीचमा एक दुईटालाई अनशन बस्न लगाईदिउँ । उसले जे भन्यो त्यहि गरौं । होईन बिधिको शासन लोकतान्त्रिक प्रणाली हो भने प्रणालीभित्रबाटै समस्या समाधान गरौं । त्यो भन्दा बाहिरबाट गर्नु भनेको लोकतन्त्रको उपहास हो ।’उनले गोविन्द केसीलाई सँगै बसेर सक्नेजति समस्याको समाधान गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । सरकार र पार्टी गोविन्द केसीको माग पुरा गर्न तयार रहेको भन्दै उनले भने, ‘ डा. केसीजी तपाई कसैको घेरामा त पर्नुभएको छैन ? हामीलाई तपाईप्रति कुनै घृणा छैन । तर तपाईको नाममा देशमा अराजकता फैलाउन खोज्नेहरुप्रति सरकार, पार्टी कसैलाई सह्य हुँदैन । हामी सहन सक्दैनौं ।उनले प्रतिपक्षी दल काँग्रेसलाई वार्तामा बसेर सबै समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्दै देशको समृद्धिमा सबैलाई एक हुन आग्रह गरेका थिए ।